Daawo :-Xubno ka Tirsan Golaha wasiirrada Somaliland Oo Laga Helay Caabuqa COVID-19 |
Daawo :-Xubno ka Tirsan Golaha wasiirrada Somaliland Oo Laga Helay Caabuqa COVID-19
War kasoo baxay wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in xubno kamid ah golaha wasiirrada laga helay xanuunka Coronavirus oo hadda aad ugusii baahaya dhulka Soomaaliyeed.
Wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa xaqiijisay in labo xubnood oo ka tirsan wasiirrada laga helay xanuunka, xaaladdooduna ay wanaagaantahay.
Maxamed Axmed Cawad oo ah wasiirka wasaaradda maal-gashiga Somaliland ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bogga lagu gudbiyo farriimaha gaagaaban ee Twitter-ka ayaa waxa uu ku xaqiijiyay in baaritaan lagu sameeyay laga helay COVID-19, xaaladdiisuna ay hadda hagaagsantahay.
“Waxaan sameeyay baadhitaanka caabuqa covid19, jawaabtuna posative ayeey noqotay, xaaladeydu way fiicantahay, wax xanuun ah oo aan dareemayana ma jiro ” wasiir Maxamed Axmed Cawad ayaa ku qoray Twitter-kiisa.
Maalmahii ugu dembeeyay xanuunka COVID-19 ayaa aad ugu baahayay Somaliland, iyadoo dad badanna uu soo ritay, balse wasaaradda caafimaadka ayaa wadda dadaallo lagu xakameynayo.
Wasiirkii labaad oo xukuumadda Somaliland ka tirsan ayaa sheegay in laga helay cudurka Covid-19.
Wasiirka Boosaha iyo isgaadhsiinta Somaliland Dr Cabdiweli Suufi, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in laga helay cudurka.